Ugaasyadii kasoo horjeeday shirka Jowhar ee Baladweyne oo tegay Jowhar: SAWIRRO - Hablaha Media Network
Ugaasyadii kasoo horjeeday shirka Jowhar ee Baladweyne oo tegay Jowhar: SAWIRRO
HMN:- Ugaasyadii sida ugu weyn ugu soo horjeeday shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ugu danbeyntii maanta gaaray magaalada Jowhar iyagoo ku biiray ergada ka qeybgalay shirka maamul u sameynta Hirshabeelle.
Ugaasyada tegay Jowhar ayaa waxay kala yihiin Ugaas Cali Ugaas Muxumad Shafeec oo ahaa afhayeenkii duubabka Hiiraan iyo Ugaas Cali Ugaas Xasan Raage oo labaduba ahaa duubabkii ugu danbeeyay ee ka maqnaa shirka Jowhar.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaliya Cabdirxmaan Xuseen Odawaa, ayaa wafdiga Ugaasyada ku qaabilay xarunta Maamulka Gobolka ee magaalada Jowhar, waxaana wasiirku tilmaamay in ay aad u soo dhawaynayaan Ugaasayada soo garay Jowhar si ay ugu biiraan dhameystirka dhismaha dowlad gobaleed Hirshabeelle.
Waxaa jiray warar soo baxayay maalmahan oo ahaa in ugaasyadii hore u diidanaa shirka Jowhar inay aqbaleen balse Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu weli diidan yahay ka qeybgalka shirka ama aqbalida natiijada ka soo baxday shirka. Hase ahaatee warar kale ayaa sheegaya in Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu maalmaha soo socda tegi doono Jowhar.